Abwaan Hadraawi oo abaal-Marin Caalami Ah La Gudoonsiiyey. (Daawo Sawirro | Salaan Media
Abwaan Hadraawi oo abaal-Marin Caalami Ah La Gudoonsiiyey. (Daawo Sawirro
Hargeys(Ramaas) April 18, 2013-Waxa caawa Magaalada Hargeysa Abaal-Marin caalami ah lagu gudoonsiiyay Abwaanka Wey nee Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Abaal marintaas oo uu bixinaayay Safiirka Dalka Holand u fadhiya Kenya, Somaliya iyo Somaliland Joost Reintjes waxaanuu Safiirku wakiil ka ahaa ama matalaayey Boqoradda Dalka Holand Prince Clouse oo iyadu bixisa Billad Sharafeedkan Sannad walba.
Xafladda gudoonsiinta oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday Hotel ka weyn ee Ambassador. Waxa xafladdan ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka kala socota saddexda gole qaran, Abwaanno, Aqoonyahanno ,wufuud caalami ah iy Marti sharaf kale.
Waxa ugu horeynba halkaas ka hadashay Wasiirka waxbarashada Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyadu ku hadlaysey Afka Xukuumadda, Marwo Samsam waxay uga mahad celisay Boqoradda dalka Holand Abaal-marintan Caalamiga ah ee ay ku maamuustay Abwaan Hadraawi iyada oo sheegtay inuu Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) kaalin mug weyn leh kaga jiro Suugaanta Dadka Afsoomaaliga ku hadla oo dhan. Marwo Samsam ayaa sheegtay iney iyaga Dawlad ahaan ay ku wacneyd iney abbaal mariyaan Abwaan Hadraawi balse ay aad iyo aad u soo dhaweyneyso Abaal marinta ay Dawladda Holand siisay Hadraawi.
Waxa isna halkaas ka hadlay Qoraa Siciid Jaamac oo uga soo kicitimay Carriga Ingiriiska sidii uu uga qeyb gali lahaa Xafaldda lagu Abaal-Marinaayo Abwaan Hadraawi. Siciid waxa uu sheegay in Abwaan Hadraawi yahay Suugaan yahannada sida qotada dheer wax u alliga isla markaana ku saleeya suugaantiisa kolba dareenka ka dhex jira Ummada uu la nool yahay. Waxa uu Siciid Jaamac halkaas ku soo bandhigay Buug lagu uruurinaayo qaar ka mid ah Suugaanta Hadraawi kuwaas oo lagu turjumi doono Afka Ingiriisiga.
Ambassador Joest Reintjes ayaa isna halkaas ka sheegay inay aad iyo aad ugu riyaaqsan yahay uguna faraxsan yahay ka soo qebgalka Xafaladdan lagu Abaal Marinaayo Abwaan Hadraawi. Waxa uu Safiirku sheegay inuu ilaa yaraantiisii xiiseyn jiray dadka Soomaalida ah uuna yimi isaga oo 12 jir ah Soomaaliya.
Safiirku waxa uu tilmaamay inuu Abwaan Hadraawi ka mid yahay Hal-Abuurada Caalamka ee ay Abaal Mariyeen kuwaas oo qeyb ka qaatay horumarinta bulshada iyo dhaqanka. Ambassador Joest ayaa halkaas ku gudoonsiiyey Abaal-Marintii Caalamiga aheyd ee uu ka siday Boqoradda Dalka Holand isaga oo matalaya iyada.
Ka dib gudoonsiintii Abaal-Marinta, ayaa waxa hadalkii qabsaday Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) oo halkaas si farxadi ay ku dheehantahay islamarkaana niyad san Abaal-Marinta Caalamiga ah ee la gudoonsiiyey. Hadraawi ayaa sheegay inuu wax ku yahay Ummadda Soomaaliyeed ee uu Assal ahaan ka soo jeedo. Hadraawi waxa uu yidhi “ Alle ayaa mahad iska le, Allahaas oo I siiyey aragtida dheer ee ka fog ku dhaqanka Qabyaaladda. Waxaan goostay inaan gogosheyda fidsado oo aan caalamka ku gaadho”.
Abwaanka weyn ee Soomaaliyeed waxa uu halkaas ku soo bandhigay qeybo ka mid ah Gabeygiisii Gudgude, beydadkaas oo tilmaamaya garashadiisa xeesha Dheer iyo in Afkaartiisu ay gaadho Aduunka. Hadraawi ayaa ku bogaadiyey Hal-Abuurka kale iney sidiisa oo kale da’daalaan si ay u helaan Abaal-marinada Caalamiga ah ee kale.
Ugu dameyn waxa halkaas ka hadlay dad kale duwan oo ay ka mid yihiin Abwaan Xassan Xaaji Cabdillaahi ( Xassan Ganey) iyo Boobe Yuusuf Ducaale oo labadooduba hambalyeeyay saxiibkood Hadraawi islamarkaana ka sheekeeyey qeybo ka mid ah Taariikhdii Hadraawi.